မြန်မာ (Burmese) | ASIC's MoneySmart
This page contains Burmese translations of MoneySmart content. To view the publications below in English, go to publications. To access the audio and photo stories in English, go to the Money management kit for community settlement workers.
MoneySmart ဆိုတာ ဘာလဲ။ (What is MoneySmart?)
အသံသွင်းခွေ (Audio stories)
ဗီဒီယ (Photo stories)
ဤကွန်ရက် တွင် သင့် ငွေကြေးအကြောင်းကို သင် က ကောင်းသော ရွေချယ်မှုများ ပြုရန်အတွက် အထောက်အကူပြုသည့် အခမဲ့ဖြစ်သော လွတ်လပ်သည့် အချက်အလက်များ ရှိပါသည်။ MoneySmart ကို Australian Securities and Investments Commission (ASIC) က ထုတ်လုပ်ထားပြီး ၊ ၄င်းသည် အစိုးရအဖွဲ့အစည်း တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
သင့်အနေဖြင့် ငွေကြေး မည်မျှကို သင် က သုံးရန် ၊ စုဆောင်းရန် နှင့် ချေးယူရန် တတ်နိုင်သည် တို့ ကို သင် တွက်ချက်ရာတွင် အထောက်အကူပြုသည့် ဂဏ္ဍာန်းတွက်စက် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဖြင့်သာလျှင် ရရှိနိုင်သည်) MoneySmart တွင် ရှိပါသည်။
အကယ်၍ သင့် တွင် သင့်ငွေကြေး နှင့် ပတ်သက်၍ သို့မဟုတ် ငွေကြေးအကြောင်း တစ်ဦးဦး က သင့်အား အကြံဥာဏ်ပေးသည့် ကိစ္စ နှင့် ပတ်သက်၍ ပြဿနာများ ကြုံတွေ့နေလျှင် ၊ သင် ASICအား ပြောပြနိုင်သည်။ သင့် တိုင်တန်းချက် ကို မည်သည့်နေရာ တွင် သင် တိုင်ကြားနိုင်သည် ကို ကျွန်ုပ်တို့ ရှင်းပြနိုင်ပါသည်။ ASIC ကို ဖုံးနံပါတ် 1300 300 630 ဖြင့် ခေါ်ပြီး စကားပြန် တစ်ယောက် အတွက် မေးမြန်းပါ။.
ကျွန်ုပ် ငွေကြေး ကို စီမံခန့်ခွဲရေး အချက်အလက်စာရွက်များ
သြစတြေးလျားနိုင်ငံ တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း (လခ ၊ အခွန် နှင့် အိုနာစာစုဆောင်းရန်ပုံငွေ)
အိမ်ထောင်စု ရသုံးငွေများ (Household budgets)
စုဆောင်းမည့်ငွေ (Saving money)
ဘဏ်အပ်ငွေ အမျိုးအစားများ (Types of credit)
ပေးရမည့်ငွေတောင်းခံလွှာများ (Paying bills)
သြစတြေးလျားနိုင်ငံ တွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်း (လခ ၊ အခွန် နှင့် အိုနာစာစုဆောင်းရန်ပုံငွေ) (Working in Australia: Pay, tax and superannuation)